Topnepalnews.com | एनआरएनए जापान निर्वाचन बिबाद ! 'साँडे जुधेपनि मिलेपनि मासिने बाली नै'
एनआरएनए जापान निर्वाचन बिबाद ! 'साँडे जुधेपनि मिलेपनि मासिने बाली नै'
Posted on: September 06, 2017 | views: 4654
गैर आवासीय नेपाली संघ जापानको २०१७-०१९ को नेतृत्व चयन सहमती र सहमती नजुटेका बिषयमा निर्वाचन मार्फत सम्पन्न भएको छ ।
निर्वाचन हुने मितिभन्दा तीन साता अघि अध्यक्षमा टासी वाङदी लामा चयन हुँदा प्रतिस्पर्धी अनुज थापाले दाबेदारी छाड्दै सहमती निर्माणमा साथ दिएका थिए । अध्यक्ष दावेदारी छाडेका थापा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यमा सिफारिस भए ।
परिषदको ६ सदस्य मध्ये पाँचमा यसअघि नै उम्मेद्धारी दिएका कपिलदेव थापा, दिनेश गुरुगं, डिलाराम खरेल, टंक गैरे र केशर गिरीको मात्र उम्मेद्धारी परेपछि निर्विरोध भएका थिए ।
यसैगरि अध्यक्षमा दावेदारी देखाएपनि देविलाल भण्डारी बरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्विरोध भएका थिए भने सह कोषाध्यक्षमा राम थापा चयन भएका थिए ।
कोषाध्यक्षका उम्मेद्धार प्रल्हाद सिंह महत र महेन्द्र कुमार अधिकारी उम्मेद्धारी फिर्ता लिन सहमत भएपछि कालिका थापा कोषाध्यक्षमा निर्विरोध चयन भइसकेकी थिइन् ।
अन्तिम समयमा महिला उपाध्यक्षमा सविता श्रेष्ठले उम्मेद्धारी फिर्ता लिएर अनिता गुरुगंलाई बाटो खुलाइदिएपछि बाँकी पदहरु दुई उपाध्यक्ष, सचिव, महिला सदस्य र ५ सदस्यमा मात्र मतदान भयो ।
पहिलो पटक अनलाईन मार्फत गरिएको मतदानको नतिजा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक घण्टा भित्रनै सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक आधिकारीक नतिजा अनुसार उपाध्यक्षमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर शिव प्रसाद पौडेल बिजयी भए भने सरोज कुमार खत्रीले तीन प्रतिस्पर्धी द्रोण बहादुर सिलवाल, जीवन न्यौपाने र छत्र बहादुर दाहाललाई पराजित गरे ।
सचिवमा जनक विक्रम शाही बिजयी हुँदा बासुदेव लामीछाने हार्न पुगे । एक मात्र महिला सदस्यमा सृजना पाण्डेले बाजी मार्दा गीता आचार्य स्मृति र कमला गैरे हार व्यहोर्न बाध्य भए ।
२१ सदस्यको दौडमा भने राजन कुमार पौडेल, नारायण खड्का, लालबहादुर रावल, हस्त लामा र बालकृष्ण कंडेल केन्द्रिय सदस्य बन्न सफल भए ।
नेतृत्व चयन सकिएसँगै निर्वाचीतहरुको सपथ यही सेप्टेम्बर १० तारिखमा तोकिएको छ । तर शपथ अघिनै पराजित भएका भनिएकाहरुबाट सामुहिक बिरोध हुँदा बिजयी भएकाहरुले खुशीको स्वाद मज्जाले लिन पाएका छैनन् ।
सदस्य बनाउने क्रममा भएको कमजोरी, सदस्यता वितरण हुँदै मतदानसम्म जारी रह्यो र यसले नतिजामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । तर निर्वाचन कमिटि, निवर्तमान अध्यक्ष र सबै बिजयी उम्मेद्धारहरुको एक स्वर छ ऐतिहाँसिक सफल र निस्पक्ष निर्वाचन भएको छ ।
मतदान जारी रहँदा ६ बजे तोकिएको समय अकस्मात बढाइयो । सिमित मत मात्र एक डिभाइसबाट राख्न पाउने भनिएको प्रविधि अकस्मात खुल्ला गरियो । गुमनाम व्यक्तिहरुको उदय, चर्चीत अनुहारहरुको पराजय । उम्मेद्धार देखी कयौं मतदाताले मत खसाल्न नपाएको गुनासो । सदस्यता बनाउने नाममा मतदानको दुरुपयोगको आरोप र प्रत्यारोप मुख्य त निर्वाचनको बैधतामाथि उठेका मुल प्रश्नहरु छन् ।
टपनेपालन्युजडटकमले प्राप्त गरेको दुई विश्वस्त श्रोतको सुचना र हाम्रो दाबी स्पष्ट छ कि ६ बजेसम्मको नतिजामा उत्तम कुमार श्रेष्ठ केन्द्रिय सदस्य ५ मध्येको भित्र थिए । र ६ बजे टपनेपालन्युजले त्यही आधारमा उनी बिजयी भएको समाचार राख्यो । तर यही समाचारले बिवाद निम्त्याइको तर्क स्वयं उम्मेद्धार श्रेष्ठले अस्विकार गरेका छन् तर नेतृत्वले यसमा असहमती अझ भनौं गम्भिर आरोपका साथ यसको अप्रासंगिक प्रतिवाद गरेको छ । जसको प्रमाण हामीले सुरक्षित राखेका छौं ।
बढाइएको समयमा भएको मत परिणामको नतिजा हामीले अपडेट श्रोतबाट लिएनौं र अन्तिममा सार्वजनिक मतपरिणाम प्रकाशित गर्यौं यसमा टपनेपालन्युजको कुनै न कमजोरी रहेको छ न त त्रुटी । यसका असहमत भएका जो कोही व्यक्तिले खण्डन, प्रतिक्रिया वा विज्ञप्ति आधिकारीक उपलब्ध गराएका छैनन् शिवाय मौखिक बिरोध । यस आधारमा यो विवाद यत्तिमै सिमित छ अहिलेसम्म ।
कुरा रह्यो उम्मेद्धारहरुकै बिरोध । सामुहिक रुपमा निर्वाचन धाँधली रहेको भन्दै उम्मेद्धारहरुबाट विज्ञप्ती आइसकेको छ । हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर फिर्ताको अनुरोध र केही दबावका बिच आधा दर्जन उम्मेद्धारहरुले टपनेपालन्युजडटकमलाई आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता नलिएको सूचना दिएका छन् । र यो समाचार प्रकाशित हुँदा सम्म कुनै एकमात्र सदस्यले हस्ताक्षर दुरुपयोगको कुनै जानकारी बाहिर ल्याएका छैनन् ।
निवर्तमान अध्यक्ष सुदन थापा र निर्वाचन कमिटिका संयोजक ओम गुरुगंले निर्वाचन सबै हिसाबले निष्पक्ष भएको जनाइसकेका छन् । अध्यक्ष थापाले विज्ञप्ति र संयोजक गुरुगंले एक अन्र्तवार्ता मार्फत लागेका आरोपहरुको खण्डन समेत गरिसकेका छन् ।
तर पनि अझै बिरोधका स्वरहरु जारी रहेका छन् र यो बिरोध आईसिसि नेतृत्व शेष घलेसम्म पुगिसकेको छ ।
सदस्यता जुनसुकै संस्थाले जो कोहीको बनाउन सक्ने बनाईंदा मौन रहनुमा अहिले बिरोध गरिरहेकाहरुको समेत स्वार्थ गांसिएको थियो ।
सदस्यता शुल्क अनलाईन भएपनि एकमुष्ट रकम भुक्तानीले उब्जाएको प्रश्नमा पनि सबैको स्वार्थ जोडिएको थियो ।
अझ सदस्यहरुको परिचय पत्र वितरणमा जसको शक्ति उसको भक्ति तरिकाले सामाजिक सञ्जालमै दर्जनौं परिचयपत्र सहितको फोटो राखिरहँदा समेत मौन रहनु अहिले बिरोध गरिरहेकाहरुको मुख्य कमजोरी हो ।
एक डिभाइसबाट ५ मत मात्र दिन पाउने भनिएपनि त्यो लागु हुन्न भन्ने भित्रि बुझाई बुझिसकेका बिरोधमा रहेकाहरु आफैं दर्जनौं मतपत्र एकसाथ बोकेर मतदानको समय कुरिरहेका थिए ।
मात्र यत्ति रह्यो कसले कति मत बटुलेर एकसाथ राख्यो र कसरी बटुल्यो त्यतिधेरै मतपत्र एकसाथ ।
केही संस्थागत संलग्नता केही राजनीतिक सम्वन्ध अनि केही स्वार्थ गाँसिएकाहरुको जोड घटाउनै निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम हो । फरक यत्ति हो अहिले निष्पक्ष निर्वाचनको दाबी गरिरहनेहरु र धाँधली निर्वाचनको लगाम भिराउनेहरु दुवै यसका मतियार हुन् । कसको संलग्नता कति प्रतिशत भन्ने मात्र यसमा मुल प्रश्न हो ।
मात्र यसमा बलिका बोका बनेका भनेका दुई थरि एक स्वतन्त्र रुपमा व्यक्तिगत योग्यता र त्यागले उम्मेद्धार बनेकाहरु हुन् भने अर्को एक नेपालीको रुपमा सदस्य बनेर स्वतन्त्र मतदान गर्ने एक करिव चौथाई मतदाता मात्र हुन् । भिडन्तमा उत्रने जति छन् सबै साडे जुधाईका रुप हुन् । बुझ्न के आवश्यक छ भने यो भिडन्तमा देखिएका अनुहारहरु मिले पनि र जुधेपनि मासिने भनेको बाली हो । बालि अर्थात् जापानमा रहेको एकतृत नेपाली समाज र जापान सरकारको आँगनमा हाम्रो नेपाली छवि ।